श्रीमानले अलपत्र पारेर मर्नु न बाँच्नु बनेकी रबिना बादी यस्तो प्रतिभाशाली (भिडियो) – Rabin's Blog
लुटिनलाई बाँकी के नै पो छ र रबिना बादीसँग ? गुमाउनलाई पनि के नै पो छ र ? जसले उनलाई लुट्यो तिनै बलात्कारीकै श्रीमती जबरजस्ती समाजले बनाईदियो त्यो पनि बाबुको उमेरको मान्छेसँग । दोस्रो बिबाह गरिन, उनले पनि छोरो सहित यो हालतमा पशुपतिमा छाडेर बेपत्ता भएको अबस्थामा समाजसेवी किशोर सुनुवारको प्रयासमा मानब सेवा आश्रममा आज शरण पाएकी छिन । अब बाँकी उनको मधुर, हृदयस्पर्शी आवाज छ तर पनि खै थाहा छैन अवसर उनलाई कसले दिने ? रबिनाले गुमाउन अब केहि नभए पनि पाउनलाई प्रशस्त छ ।
हाम्रो समाजमा माया र प्रेमको जालोमा फसाएर भर्खरै कोपिला लाग्दै गरेका विभिन्न युवतीहरुलाई मृत्युको मुखमा पु¥याइएको घटना पनि हाम्रै समाजमा छ । २ वर्षीय नावालिका देखि ७०/८० वर्षीय बृद्धालाई समेत बलात्कार गरेर हत्य गर्नेहरु पनि हाम्रै समाजमा छन् ।
रबीनाको छोरो पाँच महिनाको हुँदा श्रीमान बिनोद भने बिदेश सवार भए । तर रबीनाको जीवनमा कुनै पनि सुख थपिएन, पीडा मात्र थपिदै गयो । बिदेश पुगेका श्रीमानले रबीनालाई मन नपराउने भन्दै घर छोड्न धम्की दिन्थे । छोरो बिरामी परेको समयमा पैसा पनि पठाउँदैन थ्यो । उसले मलाई विभिन्न प्रकार युवतीहरुसँग बसेको तस्वीर पठाउने र ‘तिमी भन्दा राम्री केटी पाएकी छु । मेरो घर छोडिहाल’ लगाएतका मानसिक यातना दिईरहन्थ्यो ।
यसै कुरालाई बढाउँदै रबीनाले भनिन्, ‘मेरो छोरो त्यति धेरै बिरामी हुँदा मलाई सहयोग गरेनन् । पाँच वर्षसम्म मैले त्यस्तै समस्याहरुलाई झेलिरहेँ र छोरोलाई पनि सँगसँगै हुर्काए । त्यसपछि मलाई लाग्यो, अब म आफ्नो खुट्टामा आफै उभिनुपर्छ । मैले प्लस टु पास गरेकी गरिसकेकी छु । त्यसैले मैले काम गर्नु पर्छ ।’
यसरी जातको कुरालाई लिएर अलपत्र पारिएकी रबीनाले आफ्नो श्रीमान श्यामलाई एक पटक भेट्न आग्रह गरेकी छन्, भने छुट्टिनु परेपनि सल्लाहमै छुट्टिले बताएकी छन् । उनले भनिन्, ‘जात मैले बनाएको होइन् । मेरो पनि गल्ति हुनसक्छ तर जात मैले बनाएको होइन् । मेरो छोरोको जन्मदर्ता गर्नुपर्छ । पछि ठुलो भएपछि मेरो छोराले मेरो बाबा को हो भन्दा मैले के जवाफ दिने ? सोह्र वर्ष पुगेपछि नागरिकता चाहिन्छ, मैले कहाँबाट ल्याउने ?’
भर्खरै सेती नदि बाट आयो फेरी अर्को सबैलाई चकित बनाउने खबर , घटना रहस्यमय बन्दै
डा. केसीको समर्थनमा सडकमा उत्रिएको कांग्रेसका कार्यकर्ताले प्रहरीको टाउको फुटाए – तस्वीर सहित